Zọ kachasị mma iji jikwaa ọtụtụ akaụntụ Twitter | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 7, 2016 Tọzdee, Eprel 7, 2016 Douglas Karr
Biko gwa m na ị ka na-enwe obi ụtọ na Twitter… M hụrụ n'anya ikpo okwu na ikekwe mgbe niile. Nke ahụ kwuru, agbasiwo m ike ruo ọtụtụ ọnwa na ngwa ndabara desktọọpụ Twitter maka Mac. Usoro m ga-akwụsịlata iri ari, ma Twitter ga-emecha bụrụ ndị na-anaghị anabata ozi ọma. Naanị m na-eche na ndị mmepe na ndị QA na-anwale ngwa ahụ enweghị ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na ọtụtụ mmelite kwa ụbọchị dị ka m na-eme.
I bụ ejiHootsuite ma ọ bụ na ọ bụghị dị ukwuu. Njirimara onye ọrụ dị ntakịrị, ma ekwetaghị m na a setịpụrụ ohere ahụ n'etiti tweets, yabụ ọ na-apụta. Enwere m mmasị ịmepe ngwa mepere karịa ihe nchọgharị ebe ọ bụ na m na-emechi ihe nchọgharị ahụ na mberede.
Mgbe ọtụtụ afọ na-ejighị ya, ekpebiri m ibudata TweetDeck ma nwaa ya ozo. N'ofe mbipụta anyị, akwụkwọ m, ihe omume na-abịanụ, yana nyiwe email anyị, ana m ejikwa akaụntụ asatọ. Ee, ọ bụ nro… ruo ugbu a!
Multiple Account Atụmatụ Gụnyere:
Nyochaa otutu usoro iheomume na otu mfe interface.
Dutọ oge Tweets ka biputere n'ọdịnihu.
Gbanwuo ihe ngosi maka ịgbaso ozi na-apụta.
Nyocha ọchụchọ dabere na njirisi dịka njikọ aka, ndị ọrụ na ụdị ọdịnaya.
Mee ma wepụta usoro iheomume iji tinye na weebụsaịtị gị.
Jiri mkpirisi igodo kiiboodu kensinammuo maka igodo oma.
Ogbi ndị ọrụ ma ọ bụ okwu iji kpochapụ mkpọtụ achọghị.
Etinyela ume ume ọzọ: TweetDeck timelines stream na ezigbo oge.
Họrọ otu isiokwu ma ọ bụ nke gbara ọchịchịrị.
TweetDeck Ọbụna Gụnyere Njikwa Otu!
Ikekwe nnukwu ihe ijuanya mgbe ọ na-abịa TweetDeck bụ na njikwa otu a na-ewu ya ozugbo na ngwa ahụ! M nwere ike mfe ịkekọrịta akaụntụ n'etiti ndị otu na-enweghị na-akwụ ụgwọ kwa ọrụ ikike ụgwọ ma ọ bụ, ka njọ, maka ihe Enterprise elekọta mmadụ n'elu ikpo okwu. Naanị m na-emeghe ntọala otu ma gbakwunye akaụntụ Twitter na ma ha ga-esi na akaụntụ ahụ ma ọ bụ kesaa onye nwe ya!
Na eziokwu niile, ekwenyere m na Twitter kwesịrị ịla ezumike nká OSX desktọọpụ ma nye TweetDeck kama. Ọ na-arụ ọrụ flawlessly. Enweghị m obi ike na nke ahụ ga-eme, n'agbanyeghị, kemgbe ọnwa gara aga Twitter mara ọkwa na ọ bụ imechi ụdị nke Windows, na-achọ ndị ọrụ Windows iji banye na ngwa weebụ kama.
TweetDeck ka dị ka Ngwa Chrome na Mac ngwa maka ugbu a. Ọ na-egosi na mmemme Windows lara ezumike nká naanị n'ihi na ọ dịghị mfe jikwaa nzere Twitter rụọ ọrụ nke ọma.
Biko nye TweetDelee ịnwale ma ọ bụrụ na ị nọ na Mac ma gosi ngwa ahụ ụfọdụ ịhụnanya na ọkwa App Store! Emere m!
Tags: jikwaa ọtụtụ akaụntụ twitterTweetdeckTwitterNjikwa twitternjikwa otu ndi twitter
Apr 7, 2016 na 9: 25 AM
Ekwenyere m! Nye m, Twitter bụ opekata mpe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Amalitere m n'oge na-adịbeghị anya iji TweetDeck, ma chọta ya-enyi na enyi. Daalụ maka ịkekọrịta!